Ama-archive we-Gourmet - Senziwe eSpain
Ukuvakashelwa okuphoqelekile eSpain
Spain ngezinzwa ze-5
Imikhiqizo ye-Gourmet evela kulo lonke elaseSpain. I-gastronomy yaseSpain ezokwenza ukuthi uyithande ngaphezu kwanoma iyiphi enye. Ama-hams ama-artisan ase-Iberia, Amanye amafutha e-Virgin Olive of Quality Gourmet, Ushizi kuphela eyenziwa emzaneni, amaswidi, liqueurs nokunye okuningi!
I-Aceites Camino de Aníbal, i-Gourmet Quality esuka e-Albacete
Kuthunyelwe ku-On 29 January, 2019 16 February, 2019 By HBamazwana
U-Hannibal wayengumqondisi omkhulu waseCarthage, owaziwa ngokuba omunye wezigaba ezinhle kakhulu emlandweni, futhi ikakhulukazi ekuhambeni kwakhe ePyrenees nezinendlovu zakhe. I-Aceites Camino de Aníbal ithatha igama layo ngoba amazwe akhula kuwo ama-olive grove ayatholakala emgwaqeni owadumile wase-Afrika Qhubeka ufunda
UHam weTeruel El Ferial, ikhwalithi kanye nesiko
Kuthunyelwe ku-On 15 January, 2019 16 February, 2019 By HBamazwana
Kumasipala waseTeruel weCedrillas, cishe ngamakhilomitha angu-35 kusukela enhloko-dolobha iTeruel, emazweni ahlanjululwa uMfula iMíjares, iTuruel Ham engavamile kanye neminye imikhiqizo yengulube evela endaweni. IJamones el Ferial, ummeleli weSierra de Cedrillas SL, uye wabonakaliswa ngabanye abakhiqizi endaweni Qhubeka ufunda
Amawayini okuchitha isiphepho esiqhingini esiwugwadule noRichard Branson
Kuthunyelwe ku-On 9 January, 2019 16 February, 2019 By HBamazwana
I-Necker Island yigama lesiqhingi esizimele se-billionaire engumholi uRichard Branson, esendaweni yeVirgin Islands, lapho uLwesithathu olwedlule u-Irma usuqedile ukubhubhisa yonke into endleleni yayo. Kumele kuqashelwe ukuthi i-Irma, isiphepho se-5 ku-5, ingenye ye Qhubeka ufunda
Thola Kuthiwe eSpain! Isitolo sakho se-inthanethi semikhiqizo yaseSpain. Ukuthunyelwa kuzo zonke iYurophu
Imibono yokunikeza iwayini ngosuku lukaBaba
Vinos del Bierzo, iDemocratic Origin of fashion emhlabeni
Iwayini le-Gastronomy Shop
I-copyright Yonke into egcinwe kahle: I-Galway Lite ngu I-Themeinwp
Isikhungo sezintandokazi zobumfihlo
Ikhukhi ifayela noma idivayisi elandelwa kwimishini yokugcina yomsebenzisi ngenhloso yokugcina idatha engabuyekezwa futhi ibuyiselwe yinhlangano ephethwe ukufakwa kwayo. Okusho ukuthi, ifayela elilandiwe kwikhompyutha yakho uma ufinyelela amanye amakhasi eWebhu. Amakhukhi avumela ikhasi leWebhu, phakathi kwezinye izinto, ukugcina nokuthola ulwazi mayelana nemikhuba yokuphequlula komsebenzisi noma imishini yabo futhi, kuye ngokuthi ulwazi oluqukethe nendlela esebenzisa ngayo imishini yabo, zingasetshenziswa ukuqonda kumsebenzisi
Uhlobo luni lwamakhukhi enza le webhusayithi isebenzise?
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi avumela abasebenzisi ukuthi basebenzise futhi bahambe kuwo, baqinisekise ukufinyelela kwamasevisi athile, futhi bathuthukise ukucushwa kokusebenza kwewebhusayithi.
Ngokuqondile, lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi alandelayo:
Ukuhlaziywa Amakhukhi: Lawa makhukhi asetshenziselwa ukuhlaziya ukuziphatha kanye nezenzo zabasebenzisi bekhasi leWebhu kanye nokwakhiwa kwamaphrofayli okuhambisa ukuze kwenziwe ngcono ukuthuthukiswa kobuchwepheshe nokusebenza.
Isicelo esisisebenzisayo ukuphatha la makhukhi yisakhiwo se-Google Analytics (www.google.com/analytics/)
Indlela yokuphatha ukucushwa kwamakhukhi?
Kulesi sigaba isethulo esifushane sokubonisana nokufeza ukucushwa kwesistimu nama-cookies maqondana neziphequluli ezivame kakhulu noma ezisetshenziswa kakhulu.
Ngalokhu, cishe zonke iziphequluli zenza umsebenzisi athole ulwazi olujwayelekile mayelana namakhukhi afakwe ekhasini lewebhu, ikakhulukazi ukuqinisekisa ukuthi kukhona okufanayo, isikhathi sabo noma uhlelo lokuqeda. Ngalo mqondo, ngenhloso yolwazi, uchungechunge lwezixhumanisi ezihlobene lunikezwa:
- I-Google Chrome:
- I-Internet Explorer:
Ngakolunye uhlangothi, umsebenzisi angavumela, avimbele noma aqede amakhukhi efakwe kudivayisi yakhe ngokushintsha ukucushwa kwesiphequluli sakhe ngokuya imiyalelo ekhonjisiwe kuyo. Ngenhloso yolwazi kuboniswa ukuthi ngokuvamile ukucushwa kwamakhukhi kuvame ukuqhutshwa kwimenyu ethi "Izintandokazi" noma "Amathuluzi" wesiphequluli ngasinye, noma kunjalo, ungakwazi njalo ukuya kusiphequluli sakho ukuxazulula noma ukuxazulula ukungabaza ukuthi inhlonipho yenziwe.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi, uma ukufakwa kwazo zonke amakhukhi kuvinjelwe, okuqukethwe kweWebhu kanye nemisebenzi ethile kanye nezinsizakalo ezinikezwe yiyo kungathinteka.